“Farmaajo meel walba isagoo ku dhagan ayaa laga fujiyay” Muuse Suudi oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweynaha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 16 July 2021
Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka tirsan Aqalka sare ee Baarlamanka Somalia ayaa mar kale eedeymo yaab leh i jeediyey madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Muuse Suudi oo ka hadlayey Munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xil kasta oo horey loogu soo dhiibay Farmaajo si aanu raali ka ahayn looga qaadayey, haddana xitaa haddii ay doorasho dhacdo oo laga guuleysto ay adkaan doonto inuu si nabad ah uga baxo Madaxtooyada.
“Ninkan taariikhdiisa haddii laga sheekeeyo meel walba isagoo ku dhegan ayaa laga fujinaayey, meel waa lagu feeraayey. Meelaha qaarna waa lagu xiraayay. Haddana in xoog looga baxsho maahee iska bax ku bixi maayo. Xataa haddii cod looga raayo lagama yaabo inow caqli celsho”. ayuu yiri Muuse Suudi oo amaan iyo bogaadin u jeediyey ciidamadii badbaado Qaran.
Senator Xaaji Muuse Suudi wuxuu kaloo uu sheegay in xilligii uu Farmaajo iska casilay xilka Ra’iisal Wasaaraha 2011 inuu xafiiskii iska dhex fadhiistay 27 maamood illaa buu yiri askarta AMISOM ay ka qaadeen meesha, isagoo dhinaca kale bogaadiyey ciidamadii badbaado Qaran ee Farmaajo ku qasbay inuu ka laabto muddo kororsigii ii damacsanaa.